देखिए जतिसँग एकमेसै लड्ने भनेको क्रान्ति होइन : विप्लव (विस्फोट पछिको अन्तरवार्ता)
प्रचण्डले आफ्नो नक्कल गरेको भने । तपाईंसँगै कुनै ताका युद्धमा होमिएका गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले उपस्थिति फिचलो रहेको र चार कम्पनीको जनसरकारको अभ्यासमात्र भने ?
अरू पार्टीपङ्क्ति र समूहसँग एकता र कार्यगत एकताका पनि कुरा छन् कि ?
तपाईं भूमिगत किअर्धभूमिगत ? स्वदेश माकि विदेशमा? प्रचण्ड नेतृत्व समयकै जस्तो त होइन ?
साभार : राजनीति डट कम बाट